उत्तम चिन्ता उपचारको एक सिंहावलोकन - जिउँदो मन - मानसिक स्वास्थ्य र आराम
के तपाईं हाल चिन्ताबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ? यदि तपाईं यो अवस्था के हो भनेर सचेत हुनुहुन्न भने, तपाईंले समय-समयमा यो अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यो सामान्यतया शारीरिक प्रतिक्रिया को केहि प्रकार को रूप मा प्रकट हुनेछ। यो तनाव संग जोडिएको छ, र अक्सर अपरिचित वा गाह्रो परिस्थिति द्वारा ट्रिगर हुन्छ। यदि तपाईंले कहिल्यै डर, त्रास, वा बेचैनीको भावना महसुस गर्नुभएको छ भने, यी शब्दहरू जुन यस प्रकारको अवस्थाका प्रतिनिधि हुन्। चिन्ता धेरै तरीकाले उपचार गर्न सकिन्छ। यहाँ आज केहि उत्तम चिन्ता उपचारहरू उपलब्ध छन्।
विभिन्न प्रकारका चिन्ता विकारहरू
त्यहाँ कागजात भएका धेरै फरक चिन्ताका विकारहरू छन्। सबै भन्दा पहिले, त्यहाँ सामान्य चिन्ता छ जुन धेरै व्यक्तिले महसुस गर्छन्। यदि तपाईले भविष्यमा हुने कुनै डरको डर अनुभव गर्नु भएको छ, वा यदि तपाईले सम्भावित नतिजाको बारेमा चिन्तित हुनुभएको छ भने, यो सबैभन्दा सामान्य प्रकारको चिन्ता डिसअर्डरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। अरूले जुनूनी-बाध्यकारी विकार, आघात र तनाव सम्बन्धित विकारहरू, सामान्यीकृत र आतंक सम्बन्धित चिन्ता विकारहरू समावेश गर्दछ। सबै भन्दा आम मध्ये एक OCD हो जुन जुन जुन बाध्यकारी बाध्यकारी डिसआर्डर हो जहाँ कसैले केही गर्न वा गर्न सक्ने कार्यहरू गर्न सक्छ, जस मध्ये धेरैले सहभागीको हानी निम्त्याउँछ।
कस्तो छ चिन्ता उपचार गरिएको?
चिन्ताको धेरै फरक तरीकाले उपचार गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले, त्यहाँ औषधोपचारहरू छन् जुन मद्दत गर्न सक्दछ। यदि तपाईंलाई कहिले पनि Valium वा Xanax निर्धारित गरिएको छ भने, यी दुई फार्मास्युटिकल ड्रग्स हो जुन छुट्टिएर चिन्ता डिसअर्डर, सेलेक्टिव म्युटिजम, र PTSD जस्ता सर्तहरूमा मद्दत गर्न सक्छ। यदि फार्मास्यूटिकल्स त्यस्तो चीज हो जुन तपाईं बेवास्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने, बिनोराल पिट धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ। यी टोनहरू थोरै फरक छन्, प्रत्येक कानमा खेलाइन्छ, जसले तपाईंको मस्तिष्कको गोलार्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ। ध्यान चिन्तनबाट राहत पाउनको लागि अर्को तरिका हो। यी गैर-फार्मास्युटिकल रणनीतिहरूले आतंक र अचानक आतंक चिन्ताका विकारहरूसँग राम्रोसँग काम गर्न सक्दछन्।
चिन्ता हटाउन कति समय लाग्छ?
दुर्भाग्यवस, चिन्ता त्यस्तो अवस्था होइन जुन केवल ठीक गर्न सकिन्छ। यी उपचारहरू केवल तपाइँको दिमागलाई सन्तुलित गर्न र तपाइँको चिन्तालाई सम्बन्धित विचारहरूमा तपाइँको विचारहरू भiate्ग गर्न मद्दतको लागि डिजाइन गरिएको हो। चाहे तपाईं फार्मास्यूटिकल्स लिईरहनुभएको छ, बिनोराल टोन प्रयोग गर्दै छ, वा नियमित ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, यो निरन्तर गरिनु पर्दछ तपाईको चिन्ताको भावनालाई टोन गर्नका लागि।
उत्तम चिन्ताको उपचार के हो?
सबै भन्दा राम्रो चिन्ताको उपचार फरक फरक हुन गइरहेको छ। केहि व्यक्तिले फार्मास्यूटिकल समाधानको लागि राम्रो प्रतिक्रिया दिन्छन्, जबकि अरूले इलेक्ट्रोनिक बिनोराल टोनहरू मन पराउँछन् जुन धेरै प्रभावकारी छन्। केवल प्रत्येक दिन ध्यान दिएर, वा समय लगाएर आराम गर्न र तपाईंको दिमागले तपाईंलाई विचलित गरिरहेको कुराबाट विचलित गर्न, तपाईं चिन्तित हुनको निरन्तर भावनाबाट विश्राम लिन सक्नुहुन्छ।
चिन्ताको उपचार एक प्रक्रिया हो। कुनै वास्तविक उपचार छैन। के उपलब्ध छ उपचारहरू जुन सफल परिणामहरू उत्पादन गर्न सक्दछन्। यी परिणामहरू, तथापि, चिन्तित व्यक्तिको तर्फबाट स्थिरताका कारण हुन्। तिनीहरू आफ्नो औषधि लिनु पर्छ, वा एक अन्य रणनीति को एक स्थिर आधारमा उपयोग गर्नु पर्छ। त्यसो गरेर, तपाईं दशकौंसम्म काम गर्ने चिन्ताको लागि यी उपचारहरू प्रयोग गरेर आफ्नो चिन्तालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ।